Apple inotangisa yechitatu yeruzhinji beta yeiyo iOS 10.3.3 IPhone nhau
Maawa makumi maviri nemana mushure mekutanga wechitatu beta yevagadziri veIOS 24, ivo vakomana veCupertino vaburitsa yakafanana beta vhezheni yeIOS 10.3.3 yevashandisi vese vari chikamu cheveruzhinji beta chirongwa. Asi yakanga isiri iyo yega, sezvo Apple yakatanga zvakare yechitatu yeruzhinji beta ye macOS 10.3.3. Iyi beta yechitatu yeIOS 10.12.6 sezvatinogona kuona mune zvinyorwa zvekuburitsa zvinotarisa mukuvandudza zvese kuita kwechigadzirwa uye chengetedzo, kubvira kubvira pakaunzwa iOS 10.3.3 svondo rapfuura, izvi ndizvo chete zvichagadziriswa zvinogamuchira iOS 11, kutarisa zvese zvinoedza pane inotevera vhezheni yeiyo inoshanda sisitimu yemidziyo nhare muIOS 11.
Iyi inotevera iOS yekuvandudza inogona kunge iri yekupedzisira yakaburitswa naApple isati yasiya iyi vhezheni uye ichizvipira kune inotevera nhau iyo iOS 11 ichasanganisira mune yayo yemberi inogadziridza. iOS 10 ichave yekupedzisira sisitimu yekushandisa inogashirwa nemidziyo yese iyo nhasi inochengetedzwa ne64-bit processor, shanduko yaive yave pekutanga kuApple, kuitira ita kutsvaira muApp Store yeese mafomu asina kuvandudzwa kuti aenderane nema processor aya.
Panguva ino, uye kunyangwe Apple yakatotanga beta yekutanga yeApple 11, izvi zvinoitirwa vagadziri chete. Kusvikira gare gare mwedzi uno, Apple inotangisa yechipiri beta yeIOS 11, vakomana vanobva kuCupertino havazosanganise ese ari maviri iOS 11 uye macOS High Sierra mune yeruzhinji beta chirongwa. Kana iwe uchida kuve mumwe wevashandisi vekutanga kuyedza iOS 11 uye kubatana pamwe nekukudziridzwa kwayo nekupa mhinduro yako otomatiki, unofanirwa kunyoreswa mu Apple yeruzhinji beta chirongwa uye dhawunirodha setifiketi inoenderana neyako kifaa inokutendera kuti utore mabheji ese eiyi vhezheni inotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Apple inotangisa yechitatu yeruzhinji beta yeIOS 10.3.3
iOS 10.3.2 vs iOS 11, kumhanya bvunzo